मेरो मृत्यु उपहार दिन्छु - Limbuwan khabar
मेरो मृत्यु उपहार दिन्छु
शुक्रबार, ०३ पुष, २०७७ बिहानको १०:०० बजे, लिम्बुवान न्युज
कविताः रचना लावती (कुसाङ)
म यो चाहान्न
स्वतन्ता र इज्जतको कुरा गरेर
आफ्नै मुटुमा छुरा हान्नेहरु हो
तल्लो र माथिल्लाे जात भन्दै
जातको निर्धारण गर्नेहरु हो
म यो युगको यस्तो मान्छे हुँ
तर थाहा छैन दुनियाँलाई
बुझ पचाइ रहेछ
तिमीहरु तेही नाममा
नजानीन्दो गरी भत्काइ रहन्छौ ।
म ब्राम्हाणको चुलामा र
मन्दिरमा छिर्न नपाउने ?
मैले छोएको नखाने ?
मेरो घर भित्र दास, विक,
सार्की छिर्न नपाउने ?
बा आमा उनिहरुले
छोएको नखाने ?
वारीपारी बसेर अनि
आर्थिक कारोबार गर्ने
म सधै निस्तब्ध भएर
फलाम आफै पिट्नहोस्
लुगा आफै सिलाउनुस्
जुत्ता जप्पल आफै सिलाउनुहोस्
पैसा आफै छाप्नुहोस्
जुनसुकै यात्रामा भान्से
जसले यो वाङमय
नियम पालना गर्छ ।
म यो सयौं शोषण दमनको
बिम्नद्रमा हजारौं हजार
कविता, गीत, कथा लेख्छु ।
समाज देशलाई चुनौती दिन्छु
शिक्षित हुन परिवर्तनको
राको झोस्छु ।
दश बर्षे जनयुद्धले अन्त्य
भएको यो जातीय विभेद भन्ने
बाबुराम र प्रचण्ड र
देशको शिरमा बस्ने
खबरदारी गर्छु ।
ए महासयहरु हो
यो धर्म जाती विभेद गर्नेलाई
बलत्कारी चोरी हत्याराहरुलाई
फासी दिने कानुन बनाउ
र लागु गरेर देखाऊ
त्यो दिन म
मेरो मृत्यु उपहार दिन्छु ।
पान्थर, (हालः झापा, दमक)